BFM- BIC: tafatsangana ny Birao mirakitra ny antontam-baovao (BIC) | NewsMada
BFM- BIC: tafatsangana ny Birao mirakitra ny antontam-baovao (BIC)
Hampiakatra ny tahan’ny fifanakalozana sy ny findramam-bola ny fisian’ny Birao mirakitra ny antontam-baovao mikasika ny mpindram-bola (BIC). Voakasik’izany ny mpanjifan’ny banky na ny sampandraharaha ara-bola mahazatra, fa eo koa ny tsy mbola ao anatin’ny sehatry ny tsy ara-dalàna.
Nampahafantarina, omaly, ny fitsanganan’ilay Birao mirakitra ny antontam-baovao mikasika ny mpindram-bola (BIC). Niara-niombon’antoka tamin’ny fananganana azy ny Banky foiben’i Madagasikara (BFM) sy ny Vondrona Crif, notohanan’ny Banky iraisam-pirenena (BM) sy ny Sampan-draharaha ara-bola iraisam-pirenena (IFC) ao aminy.
Nambaran’ny governoran’ny BFM, Rabarijohn Henri, fa hanamora sady hanatsara ny tontolon’ny findramam-bola ny fisian’ity BIC ity, satria ho hita ao daholo ny antontam-baovao mikasika ny mpindram-bola, ka ho mora fantatry ny banky sy ny sampandraharaha ara-bola samihafa ny mikasika azy. Toy ny fahita any amin’ny firenen-kafa, azon’ny BIC atao ny manoro hevitra ny tsenam-bola isan-tsokajiny, hampidinan’ny mpampindram-bola ny zana-bola sy ny saran’ny fikarakarana ny antontan-taratasy samihafa.
Anisan’ny zava-baovao ampiasain’ny BIC ny “scoring psychométrique”, teknolojia niomerika amin’ny lafiny fifanakalozam-bola eto amintsika, sady mampitombo ny tahan’ny mpikirakira azy eo amin’ity sehatra ity. Mihena koa ny ahiahy amin’ny tsy fahampian’ny antontam-baovao mikasika ny mpindram-bola, sy ny mety ho fitrosana tafahoatra.
Tokony hitombo 45% ny tahan’ny findramam-bola
Notsorin’ny governora, Rabarijohn Henri, fa anisan’ny tanjona amin’ny fisian’ny BIC, ny hitomboan’ny tahan’ny findramam-bola hatrany amin’ny 45%, raha manodidina ny 20% amin’izao fotoana izao.
Nilaza ny talen’ny varotra sy ny tsena iraisam-pirenena, i Davide Michele Meo, ao amin’ny Crif Spa, fa ahafahana mikirakira ny antontam-baovao tsara sy ratsy omen’ny sampadraharaha ara-bola sy ny banky ny fampiasana ny teknolojia niomerika. Hampandroso ny toekarena sy ny tsena ara-bola eto an-toerana, hampitombo ny findramam-bola, hanampy ny orinasa madinika sy salantsalany ary ny mpanjifa tsotra. Voakasik’izany ny orinasa madinika sy salantsalany, hatrany amin’ny mpandraharaha eny ambanivohitra sy ireo tsy mbola tafiditra eo amin’ny sehatry ny ara-dalàna.